Warningdọ aka na ntị njem: Saudi Arabia gwara ndị obodo ya ka ha hapụ Lebanọn "ozigbo"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Warningdọ aka na ntị njem: Saudi Arabia gwara ndị obodo ya ka ha hapụ Lebanọn “ozigbo”
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Warningdọ aka na ntị njem: Saudi Arabia gwara ndị obodo ya ka ha hapụ Lebanọn “ozigbo”
Saudi Arabia dọrọ ndị obodo Saudi aka na ntị ka ha ghara ịga Lebanọn.
Saudi Arabia jụrụ ndị obodo ya na ịdọ aka ná ntị njem na Thursday ịhapụ Lebanọn ozugbo, Al Arabiya kọrọ.
Dọ aka na ntị kpọkwara ndị mba Saudi ka ha ghara ịga Lebanọn.
Otu isi okwu na Saudi Arabia Arabia Ministry of Foreign Affairs kwuru na a gwara ndị Saudi Saudi gara ma ọ bụ bi na Lebanọn ka ha hapụ obodo ahụ ozugbo enwere ike, dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Saudi.
Nkwupụta a na-esote ịdọ aka na ntị yiri nke Bahrain nyere na November 5 na-agba ndị obodo ya bi na Lebanọn ume ka ha pụọ ​​ozugbo.
Oku nke Bahrain bịara otu ụbọchị mgbe Mịnịsta Ala Lebanọn bụ Saad Hariri kwupụtara arụkwaghịm ya.